Dowladda hoose ee magaalada Bosaaso oo maanta burburisay dhismayaal sharci darro ah (Sawiro) – Radio Daljir
Agoosto 25, 2012 7:32 b 0
Bosaso, Aug 25 – Dowladda hoose ee magaalada Bosaaso ayaa maanta burburisay suuqii caanaha ee magaalada Bosaaso oo? ku yiillay hereeraha wadada isku xirta suuqa ganacsiga iyo dekedda Bosaso.
Goobaha ganacsiga ee la burburiyay oo u badnaa goobo ay ku ganacsanayeen haweenka caanaha iibiya ayaa ku yiillay hareeraha wadada aadda dekedda Bosaaso islamarkaana dhexmarta suuqa wayn ee magaalada Bosaso? oo gubtay dhamaadkii sanadkii 2011-kii.
Ganacsatada caanaha iibiya ee goobahooda? ganacsiga la burburiyay oo la hadlay Radio Daljir, ayaa ka cawday burburinta loo gaystay goobohooda ganacsiga, waxaana ay sheegeen dowladda hoose ee Bosaaso inay haboonayd goobo kalle ay ku ganacsadaan inay siiso, kahor burburinta maanta.
Sahra Yuusuf Barre oo ka mid ah haweenka caanaha iibiya ee goobahooda ganacsi la burburiyay ayaa ku calaacashay inay yihiin haween ku mashquulsan nolol maalmeedka qoyskooda sidii ay u heli lahaayeen.
Waxaa ay soo dhoweysay dadaal kasta oo bilicda magaalada wax loogu qabanayo, dhinaca kallena waxaa ay sheegtay? dowladda inay ka codsanayaan suuq cusub inay u samayso haweenka caanaha iibiya, maadaama aysan haysan goobo kalle.
Xildhibaan Bootaan Cali oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Bosaaso oo goobta burburintu ka socotay kula hadlay radio Daljir ayaa dhankiisa sheegay talaabadan inay u qaadayaan bilic soo celinta magaalada, isagoo xusay inay tilaabo ka qaadayaan cidkasta oo xirta ama ganacsi u adeegsata wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Bosaaso.
Magaalada Bosaaso oo ganacsi xoogan iyo dhismayaal uu ka jirro ayaa waxaa nasiib darada ugu wayn ee haysata lagu tiriyaa wadooyinka oo aad ciriiri u ah, meelaha qaarkoodna si sharci darro ah loo dago, taasoo maamulka degmada Bosaaso uu marar badan sheegay inuu wax ka qabanayo.
Dhimashada dagaalkii ugu dameeyey eedalka Syria oo kor dhaaftay 130 qof.